ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်ဘူးလား – Trend.com.mm
ညဘက်အိပ်စက်ခြင်းဟာလူသားတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အနားယူမှုပါ။ ဒီလို အချိန်မှာကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ဖို့ကအမှန်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ လူတွေကညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်တာ၊ အိပ်နေရင်းလန့်လန့်နိုးတာ စသဖြင့် ကောင်းမွန်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းကို မရရှိနိုင်တာမျိုးဖြစ်တက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်နိုင်ဖို့ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်အနည်းငယ်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်…
ဘာလိုအကြောင်းတွေကြောင့်ညဘက် အိပ်မပျော်တက်တာလဲ? ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်နိုင်ဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?
– ညဘက် အိပ်ရာဝင်ခံနီး အချိန်မှာ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တာမျိုး ရှောင်ပါ။
– အိပ်ခံနီး ၂နာရီ အလိုမှာရေကလွဲလို့တစ်ခြားပြည့်တင်းစေမဲ့အစားစာမျိုးတွေမစားပါနဲ့။
– အိပ်ခံနီး မှဖုန်းအကြာကြီးပြောမျိုး စကားတွေအကြာကြီးထိုင်ပြောကြတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
– ညနေဖက်ညဘက်လို အချိန်မှာ ကဖိန်းဓာတ်များတဲ့ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်သုပ်စတဲ့အစားစားများကို မစားမသောက်မိပါစေနဲ။
– နေ့လည်နေ့ခင်း အကြာကြီးအိပ်တက်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပါ။
– စိတ်ဖိစီးမှုမှန်သမျှကိုလျော့ချပြီး စိတ်ကိုအတွေးတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မထားပဲ အေးချမ်းစွာအိပ်စက်ပါ။
– ကိုယ့်စိတ်ပျော်မွေ့ရာပုံစံအတိုင်းအိပ်ပါ။ ပြောချင်တာက ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အိပ်ခိုင်းတာပါ။ ဥပမာ-မီးလင်းရင်ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်တက်ဘူးဆိုရင်မီးပိတ်အိပ်ပါ၊ ဘောင်ဘီနဲ့မှအိပ်လို့ကောင်းတယ်ထင်ရင် ဘောင်းဘီဝတ်အိပ်ပါ၊ အိပ်တဲ့အချိန်လေးမှာ စိတ်အနှောက်ယှက်မရှိပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလိုလိုက်နိုင်ပါစေ။
– ဘယ်လိုနေနေ အိပ်မပျော်ဘူးဖြစ်နေရင် အိပ်ယာပေါ်မှာ အိပ်ထမတင်ကဲ့သို့သောအိပ်ယာပေါ်မှာလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးထလုပ်လိုက်ပါ၊သွေးပူပြီး မကြာခင်အိပ်ချင်လာမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ်
ရှူရှိုက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး နံပါတ်စဉ်များကို အစဉ်လိုက်စိတ်ထဲကရေပြီးမျက်လုံးလေးမှိတ်ထားပါ ၊ အကြာခင် အလိုလိုအိပ်ပျော်လာပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်ကနည်းလမ်းလေးအနည်းငယ်ကိုမှတ်သားပြီး အိပ်ရေးပျက်တဲ့ရန်ကိုတွန်းလှန်ပြီးနေ့ရက်တိုင်း ကို ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်နိုင်ပါစေ…